musha Horror Varaidzo Nhau 'Spare Zvikamu' Nzvimbo Punk Rockers muGladiator Arena Nemaketani uye Mapfumo eArms
Spare Parts iri kutarisa badass. Zvinotora boka revasikana, rakakodzera bhendi rakanzi Ms. 45 uye vovaisa vachipesana nekuda kwavo munhandare yeGladiator kuti varwe neboka rejezi. Iwo majee akaaisa ipapo.
Vasikana kubva kuna Mai 45 vari kuita kwavo kwakashata kuti vazviitire mukurumbira munyika yemimhanzi. Iwo mutsara usingamire wekutamba wakakwenenzverwa husiku makirabhu uye chero chinhu chinogoneka kuti uwane kumwe kuzivikanwa. Humwe husiku vanosangana nedouche kukirabhu vanovashandisa zvinodhaka, vanovagogodza kunze uye vanovaita kuti varapwe pakurapa kuti vazove vasingazivi maGladiator.
Zvinyorwa zvinoenda seizvi:
Spare Parts yakagadzirirwa mubhawa rakasiyiwa pakati penzvimbo uko kwese-vasikana bhendi - Mai 45 - vanobvarura danho vachiparadzanisa nemweya wavo wepunk. Asi mashandiro avo anofadza anofarira fan anokwezva vasikana mumusungo, anovanyaradza, uye otanga… achivajairira. Zvishoma nezvishoma ivo vanotanga kuziva uye, mukutya kukuru, vanoona maoko avo ese atsiviwa nematemo uye macheni kuti varwisane nemhando yegladiator munhandare yejunkyard muridzi we "mambo" ane hutsinye, achivamanikidza muhondo yehupenyu hwavo nemumwe mubairo mupfungwa - kwavo rusununguko.
Ini ndakakwanisa kutarisa Spare Parts paTelluride Firimu Mutambo gore rakapera uye iri chokwadi mabhora kumadziro anonakidza kutasva. Ndiri kureva, vakadzi vayo vanokwezva vane ngetani, mapfumo nematemo emaoko vachitora misoro kubva kune mbeveve madhongi. Chii chisingade?
Spare Parts inodonha kuDvd, Blu-Ray uye VOD munaJune 1.
Iyo turera yeMarvel's MODOK inoita senge ichave inguva inonakidza yekuvaraidza nguva yakanaka. Tarisa uone tirera pano.
ndouya aikwanisapunk rockRaven BannerRLJERLJE MafirimuSpare Parts